Kucheka Mat, Inonamira Kucheka Mat, Kuverenga Board - Allwin
Kucheka Mat kune Silhouette, 8812, 12 ″ x12 ″ kucheka bonde reSilhouette cameo
Kucheka Mat kune Silhouette, 8824, 12 ″ x24 ″ kucheka bonde reSilhouette cameo
5 akaturikidzana A5 Kucheka Mat, 661A5, Kuzviporesa wega Kucheka mat
5 masheya A3 Kucheka Mat, 661A3, Kuzviporesa wega Kucheka mat
5 akaturikidzana A2 Kucheka Mat, 661A2, Kuzviporesa wega Kucheka mat
5 akaturikidzana A0 Kucheka Mat, 661A0, Kuzviporesa wega Kucheka mat
Rinorema basa maviri maburi chibhakera (150 machira), 095, Pepa chibhakera
A4 Laminator, 8018, Multi Funchtion wtih Pepa rinogadzira
Kugovera Bhodhi, 9981, Ine Pepa Rinogadzira
Dongguan Allwin Stationery Co., LTD yakavambwa muna 1999. Iyo iri mu Wan Jiang Nzvimbo yeguta reDongguan, dunhu reGuangdong. Isu takasimbisa Allwin Indasitiri (HK) International Limited muna 2009. Ninghai Allwin stationery Co., LTD yakavambwa muna 2010. Kambani yedu nyanzvi muhofisi Stationery kugadzira, chikuru zvigadzirwa vari kucheka bonde, chinotenderera aricheke, bepa Trimmer, bepa punchi fastener, bepa shredder, laminator. Kubudirira kwepamusoro uye kudhura kwemitengo, kuita zvigadzirwa zvedu zvemhando yepamusoro, uye mutengo unokwikwidza.
Bhizinesi rebhizinesi riri pasi pehutungamiriri hwaGeneral maneja Colin kuratidza hunhu hwakanaka hweCanton Fair!
Isu tinoreva maviri maCanton Fairs gore rega uye hatina kumbobvira ndisipo. Unotevera mufananidzo wevashandi vechikwata chedu chebhizimusi nevatengi pashoo iyi:
ALLWIN inoshanda nevatengi kuburikidza neCOVID-19 nguva dzakaoma
Pakutanga kwa2020, takasangana nedenda rakakosha-COVID-19. Mafekitori mazhinji aifanira kumisa kugadzirwa kwemwedzi ingangoita miviri. Mushure menguva dzakaoma, isu tatangazve zvakajairika kugadzirwa. Zvisinei, hutachiona hwave hunowedzera uye hwakaipisisa pasi rese. Mumwe wevatengi vedu uko ...
ALLWIN -Mukurumbira wekutumira zvinhu
Mumwe mutengi muBrazil akaraira 1 × 20-inch container stationery chigadzirwa mwedzi miviri yakapfuura. Pakupera kwaChikunguru 2019, iye nemukadzi wake vakauya kudura redu kuzoongororwa. Mushure mekuongorora, akagutsikana kwazvo nezvedu zvese zveWORWIN. Isu tiri kufara kwazvo nezve izvi uye isu tinotenda izvi zvichave kuenda ...
PVC Mat yakabudirira kupfuura 2.0 RoHS gumi nonmetallic bvunzo
Kuongororwa kwenzvimbo yemberi yekuvandudza kweye indasitiri yeChina yezvinyorwa
1. Ongororo yekuvandudza indasitiri yezvinyorwa Stationery zvishandiso zvakasiyana izvo vanhu vanoshandisa mune zvetsika zviitiko sekudzidza, hofisi, uye hupenyu hwepamba. Nekuenderera mberi kwekuvandudza kwehupfumi uye tekinoroji, chikamu chemidziyo chinogara chichigadziridzwa nekugadziriswa. Yemazuva ano st ...
Unogona Kubata Nesu Pano